musha > Travel Europe > 10 Free Things To Do In Paris
Pane zvinhu zvakawanda Paris anozivikanwa. Asi zvinhu Free kuitei Paris hachisi chinhu inozivikanwa kuti. Zviri inozivikanwa nokuva mumwe zvikuru kudanana nzvimbo munyika. A fashoni guru uye mabhuku paradhiso kunyange! Paris ane guises akasiyana siyana. Uye apo miziyamu kupinda kunogona kuva pamawere uye akanaka dzokudyira anouya shoma, guta guru French vangabatsirawo kokupata zuva. Musazvitenda isu? Heano 10 Free Things To Do In Paris!
First pamusoro wangu mazita 10 Best zvinhu Free kuitei Paris ndiye Musée Carnavalet. miziyamu ichi kwave akavharwa kuti vaviri emakore yaigadzirisa, zvisinei, zviri pamutemo kuvhurazve musi December, 20fung 2019! Iri enhoroondo munharaunda iri Marais, ari Carnavalet Museum iri yakatsaurirwa nhoroondo Paris. Kubva kwakatanga mazuvano.
The Mushanyi achakwanisa kuziva yakaisvonaka kuunganidza chokuita guta. Kubva Gallo Roman uye Ages zvinhu uye yamabhuku. Memories kubva French Revolution dzakawanda siyana emifananidzo, zvivezwa, fenicha uye nounyanzvi zvinhu akasiyana yakareba!
Kana muchida muguta Paris uye rudo rokuvandudza pachako zvose patsika uye pachedu, uchava Nyatsonakidzwa Musée Carnavalet! Uchashamisika nokuda kwayo zvinokosha kuunganidza, ayo akitekicha, uye mhepo, zvokuti kwese kunoitika Paris!
Ko chete ini, kana umwe nguva munhu anotaura Notre Dame, I chimbofunga Victor Hugo asingakanganwiki ane musana wakakombama of Notre Dame? Kana muchida firimu kana kwete, Cathedral iri munhu kushanya. Kwete chete chinhu badass Ages Catholic Church, asi zviri zvakare wakanakisisa mienzaniso French Gothic mapurani kunze!
The yakasvibiswa girazi mahwindo (zvikurukuru kuti Rose Window), kushandiswa mapurani mashoko akafanana kubhururuka buttresses uye zvivezwa kuti ichi chinhu anofanira kuona akasununguka Paris ruzivo. Nokuti zvakanaka Photo mikana kubva Cathedral vanokwira shongwe bhero kuti shiri ziso maonero Paris. Nokuti maonero Cathedral pachayo, Square Jean XXIII inopa yakanaka maonero kutora rwemberi maonero akanaka Monument. Best zvose? Zviri kwedu 10 Free Things kuitei Paris. Sei? You wafungidzira izvozvo. Zviri pachena!
ichi chivakwa chakanaka pakutanga kuvakwa somunhu nzvimbo yokunamatira. zvisinei, Mazuvano yave kuchinjwa kuti mausoleum. It anobata zvasara kosha vokuParis akawanda; Victor Hugo, Marie Curie, Alexandre Dumas kuti zita asi zvishoma! The pantheon iconic siluetti uye rising vari vakahwanda panguva pamusoro montagne Sainte Genevieve, gomo rechiLatin Quarter nenhoroondo.
Kubva April kusvika October, vashanyi vanogona kunakidzwa yakanaka maonero guru kubva muvharanda rising. The Neoclassical akitekicha wakafanana nowenyika ari Pantheon muRoma. Akavigwa muna Pantheon anonzi mumwe chemhando anokudza chakapiwa mumwe mugari. The IAA pamadziro pamusuo wamarinda nzvimbo anotakura testamende kuti pfungwa iyi. To yavakuru, musha vanoonga.
Kana unogona kushanyira mahara? Akafunga haumbofi kubvunza! Usununguke kubvuma Sunday ose rokutanga romwedzi kubva 1 November kusvika 31 Kurume. Free avo pasi 26 kubva kunyika mukati European Union, uyewo nesekondari vadzidzisi. Free kuti akaremara vashanyi uye muchiridzira munhu, uyewo basa vanotsvaka uye vaya French nehurumende. Uyewo vakasununguka vechiduku uye vana.
Uyewo pedyo ndidzo dzinozoiswa pamusoro kunakisa yangu Free Zvinhu kuita Paris For Free pryslys. Kufamba urefu Canal St Martin! Izvi Zvisaririra mumwe wangu vaaida rinofamba muguta rino. Munhu wakaita gang, mugero riri pamusoro 4.5 ? km refu, unobva Canal of L Ourcq kuna Seine. Pakutanga yakavakwa 1802 kubudikidza Napolean somunhu kubva chebasa Ourcq River, aiming kuunza mvura yokunwa potable kuti vokuParis yonhuwa zvinogona zvirwere akafanana korera nemanyoka.
Pamakore gumi nemashanu kana kuti mugero wacho dredged kuchenesa nayo asi munguva ichangopfuura munharaunda pachayo yakapoteredza Canal kwave kuchiita revitalization. Find kunoitwa Pubs namazariro kupararira achitevedza Canal. nzvimbo Uyu akakurumbira kutamba vokuparidzira mudzidzi. In dzakakurumbira tsika, mugero nzvimbo yakanga anoratidzwa mabhaisikopu Amélie sezvo nzvimbo yokupembera mabwe.
Marseilles kuenda kuLyon Chitengo chemitengo
Paris kuenda kuLyon Chitengo chemitengo
paka redu rokutanga hwedu 10 Free Things kuitei Paris pryslys! Izvi yakaisvonaka mumadhorobha paka iri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva Paris. Zvakakurukurwa ichi zvakasvibirira paka ine mudhamu rakagadzirwa nevanhu pamwe placidly kushambira duck, chitsuwa matombo nechepakati kusvika kugungwa rinonzi Ile the Belvedere, Temple of Sibyl (pakuyeuka yekare Roman temberi Vesta muna Tivoli) vakahwanda mashanu metres pamusoro pegungwa. Find mabhiriji unobva chitsuwa kune vamwe Park, ine promenade kufamba, uye vaizvambarara mitema patsangadzi.
Another nakisa nomukurumbira nzvimbo kushanya kuti ndiye, ehe saizvozvo, vakasununguka! A anogamuchirwa Arch, rakafuridzirwa Roman Arch of Titus, Monument ichi kupemberera upenyu French vezvourudzi akarwa rechiFrench Revolutionary War uye Napoleonic Wars. Pasi Arc nhema PAGUVA of Unknown Musoja Hondo Huru uye anoratidza kuva rimi husingaperi yave uchipfuta kubva nguva yekumbotaurirana Day mu 1921. Nhanhatu dzinokosha chaizvo reliefs munoshongedza pamadziro nomumwe kuratidza nguva kiyi Revolutionary uye Napoleonic War. Vanosanganisira General Marceaus kuvigwa, hondo Austerlitz, Arcole, Jemappes, uye Aboukir, uye Fall cheArekizandiria.
Kukwanisa kuti kuona kuchikuva uye achiona Arc kumusoro pedyo anoita mari mari asi maonero kana Snapshot iyi yaiva Monument kubva Champs Elysees kana achiparadzira bhazi kana motokari iri zvachose vakasununguka.
Ichi paruzhinji paka kuti Pakutangatanga vawana neDare Duke pamusoro Chartres. Ndiye muzukuru waMambo Louis XVI. The paka yakanga yakagadzirirwa zvifanane ane Chirungu Garden kubudikidza Louis Carmontelle. Kune vakawanda unoshamisa mapurani zvinhu Nyasha bindu. Vanosanganisira chiduku yeraundi panguva huru gedhi Park, munhu vakasiyana Egyptian chepiramidhi yekare, mumwe muvharanda Roman, mumwe Chinese nhare, munhu Dutch hwindimiri nezvimwe curiosities pasi pose. Kushanyira paki kwakafanana kushanyira tsika zvinoshamisa munyika yose muchidimbu.
Aunotarisira kuwana pane kutsva uye kuitika manyorero guru munyika? Zvadaro musapotse mukana kunopinda rimwe akasununguka mashoo rakaitirwa Galeries the Fayette, ose Chishanu pa 3 pm. Iva nechokwadi iwe kuti kuchengetedza yako paIndaneti, pachine kuitira Kuwanikwa pamusoro runodiwa musi. wo, mumwe kwazvo vakasununguka basa, kana uri panguva Galeries the Fayette, ndiko kushanyira pemba chinjiri mumwe zvakanakisisa maonero Paris. Vamwe hwindo kunotenga pashure ari kunotenga Arcade pachayo, kana uine imwe nguva.
Sarudza ichi zvinhu Free kuitei Paris hakusi zvose gore refu, asi iwe unogona kunakidzwa rakavhurika mhepo mabhaisikopo mumwedzi July uye August (China kuSunday) mune rimwe guta mumapaki kupfuura. The kuratidzwa anosiyana kubva chaiwo mabhaisikopo mamwe mabhaisikopu wepanguva. Bhuku uriri cheya uye gadzirira kuti vamwe cinematic Zvione nokukurumidza rikawira sezvo kwasviba.
At kwasviba, ose awa iri awa kwemaminitsi mashanu Eiffel Tower ichivaima uye inopa chiedza dzinoratidza kuti vaoni zvose, ichi chicharamba dzemauto the dzemauto Free zvinhu zvokuita Paris. The Place Du Trocadero achakupa zvakanakisisa chigaro nokuti anoratidza muguta.
Akagadzirira kuponesa chikwama chako vamwe Euros? Hukuru! Train matikiti havasi pakati Free zvinhu zvokuita Paris, zvisinei, kana ukashandisa Save A Train ivo nokuti havana chokwadi zvinodhura!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Free Things To Do In Paris” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/free-things-paris/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
europetravel freeparis ParisCity Paris vakasununguka Pristips Tranride Train Travel